iPhone 8 သည် Galaxy S8 ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖျက်ဆီးသည် Androidsis
ဈေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး Android သည်ပထမ ဦး ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်အရ iPhone 8 နှင့်ဆန့်ကျင်သည်
iPhone 8 ကိုပထမဆုံး ၀ ယ်သူများထံပေးပို့ခြင်းသည်မစတင်သေးသော်လည်းအရေးကြီးသောမီဒီယာအချို့သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်အားစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က Apple မှကြေညာခဲ့သော iPhone X နှင့် iPhone 8 စမတ်ဖုန်းအသစ်များဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် A11 Bionic ပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ်နောက်ကျောရှိဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုဖမ်းယူခြင်းစနစ်ကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်များကိုမျှဝေသည်။
အက်ပဲလ်ဆိပ်ကမ်းများမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအသစ်အဆန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများကယုံကြည်ကြသည် ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေဟာ Android ဖုန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် iPhone X တွင်တွေ့ရသော OLED မျက်နှာပြင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပုံရသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် iPhone 8 နှင့် iPhone X နှစ်ခုလုံးကယှဉ်ပြိုင်သော gadget များကိုဖျက်ဆီးသည်.
စံသတ်မှတ်ချက်အရယခုနှစ်တွင် Galaxy Note 8 နှင့်အခြားအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့ Snapdragon 8 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအတောအတွင်း iPhone 835 နှင့် iPhone X ကို A8 ပရိုဆက်ဆာအသစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ BGR.com မှထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Geekbench မှပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုများအရ iPhone 11 သည် Galaxy S8 ကိုလက်တွေ့ကျကျသတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
Single-core နှင့် multi-core စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ
ထဲမှာ Single-core စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု, iPhone 8 နှင့် iPhone 8 Plus တို့သည်ရမှတ် ၄,၁၉၅ နှင့် ၄၁၂၆ ရရှိခဲ့ကြသည်။ အသီးသီး။ The iPhone အတွက် X ကို ၎င်းသည်အချက်အလက်များ ၄,၀၂၈ သာလျှင်အခြေချခဲ့ပြီး၎င်း၏မျက်နှာပြင်၏ resolution ပိုမိုမြင့်မားခြင်းကြောင့် SoC သည်ကိရိယာသုံးခုစလုံးတွင်တူညီသည်။ တူညီတဲ့စမ်းသပ်မှုမှာ Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus သည်ရမှတ် ၁,၉၆၅ နှင့် ၁,၉၃၄ ရရှိခဲ့သည်iPhone အသစ်များမှရရှိသောတန်ဖိုးထက် ၀ က်အောက်လျော့နည်းသည်။
သီအိုရီအရ multi-core စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စမ်းသပ်မှုများသည် Galaxy S8 ထက်သာလွန်သင့်သည် ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့် A11 Bionic ၏ခြောက်ခုသောပရိုဆက်ဆာ။ သို့သော်အခြေအနေများမှာလုံးဝမတူပါ။
အဆိုပါအခြေခံစံနှုန်းတွင် multi-core iPhone 8 သည် 10.005 မှတ်ရှိပြီးစျေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး Android ဖြစ်သည့် Galaxy S8 ကို ၆,၄၉၄ မှတ်ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။.
မှတ်သားသင့်သည်မှာစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ပုံမှန်ကမ္ဘာရှိအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ညွှန်းဆိုချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Apple ၏အောင်ပွဲသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ဈေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး Android သည်ပထမ ဦး ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်အရ iPhone 8 နှင့်ဆန့်ကျင်သည်
အခုဆိုရင်သင်ဟာ iPhone X ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအနက်ရောင်အစင်းကိုသင်၏ Android ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါပြီ